BURULAŞ5Daimi İşçi Alımı Yapacak | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaBURULAŞ5သည်အမြဲတမ်းအလုပ်သမားများခန့်အပ်ရန်
16 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, ဂျော့ဘ်, Burulaş, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Bursa Metropolitan Municipality မှပိုင်ဆိုင်သောBURULAŞကုမ္ပဏီသည် Bursa ပြည်နယ်ရှိနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ၀ န်ဆောင်မှုနေရာအမျိုးမျိုးတွင်ကားရပ်နားရန်နေရာများကိုသတ်မှတ်ရန်5ကိုအမြဲတမ်းစုဆောင်းလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
ကြေငြာခြင်းလျှောက်လွှာနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းရက်များ - 15 အောက်တိုဘာဝယ်ယူရေးကြေငြာချက်တွင် 2019 မှ စတင်၍ လျှောက်လွှာတင်ရန်နောက်ဆုံးရက်ကို 19 အောက်တိုဘာ 2019 အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းရက်စွဲများကို 19 အောက်တိုဘာပြီးနောက်ကြေငြာမည်။
လျှောက်လွှာလိပ်စာ - ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားသောလျှောက်လွှာများကို“ Odunluk Neighborhood, Akpinar Street No:6/ 1 Nilufer / Bursa” ရှိBURULAŞမှကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ လျှောက်ထားသူများသည်အနည်းဆုံးအလယ်တန်းကျောင်း (အထက်တန်းနှင့်တူညီသော) ဘွဲ့ရရှိရမည်။
Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ်BURULAŞ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာအမြဲတမ်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအလုပ်သမား Make 40 မည်! 08 / 04 / 2019 အများပြည်သူပုဂ္ဂိုလ်များစုဆောင်းမှု 40 8 ၏တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကော်ပိုရေးရှင်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှု TULOMSAS application ကိုဧပြီလ 2019 ရက်စွဲပါတရားဝင်သတင်းစာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပို့စ်တင်သည်။ TÜLOMSAŞပြည်သူ့ ၀ န်ထမ်းများခန့်ထားခြင်း
ဝယ်ယူ Make မှ ESTRAM5အမြဲတမ်းအလုပျသမား 29 / 09 / 2019 Eskişehir Metropolitan Municipality ESTRAM5ကအမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုကြေငြာချက်ကိုကြေငြာလိုက်သည်။ ကြေငြာချက်အရ 1 စည်ရထားလမ်းစနစ်များသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအချက်ပြခြင်း၊4ဘောဇဉ်စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြင်ဆင်ခြင်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
တူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ 1 အမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုစေမည် 07 / 02 / 2017 တူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ 1 အမြဲတမ်းအလုပျသမားလကျခံရရှိပါလိမ့်မယ်: တူရကီလှည်း Industries, Inc ကို အမြဲတမ်းစုဆောင်းကိုးကား၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေဖြင့်ဖုံးလွှမ်း 1 တူရကီစီးပွားရေးကောင်စီအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ပြည်နယ် ၀ န်ထမ်း ဦး စီးဌာန (DPB) …
TCDD ပို့ဆောင်ရေးအမြဲတမ်းဝန်ထမ်း 353 ဝယ်ယူ Make မှ 25 / 12 / 2018 TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ တူရကီစီးပွားရေးအသင်း (Teo) ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအမြဲတမ်းလုပ်သားများကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်စုဆောင်းမှတဆင့်အမျိုးမျိုးသောအနုပညာရရှိပြီး 353 ကြေညာခဲ့သည်။ TCDD Taşımacılık A.Ş. မှထုတ်ပြန်ခဲ့သောကြေငြာချက်တွင်“ URKUR မှကြေငြာထားသောနောက်ဆုံးစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ပါလိမ့်မည်…
ယောဘသည်: အမြဲတမ်းအလုပ်သမား TCDD (TCDD Iskenderun ဂိုဒေါင်ညွှန်။ ) ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် 23 / 07 / 2013 TCDD အမြဲတမ်းလုပ်သားကိုငှားရမ်းရမည် (TCDD enderskenderun ကုန်လှောင်ရုံမန်နေဂျာ) - TCDD သိုလှောင်ရုံ ISKENDERUN လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးရက် - 31 ဇူလိုင် 2013 အထွေထွေစည်းကမ်းချက်များနှင့်မှတ်စုများအထွေထွေရှင်းလင်းချက် - စက်ပစ္စည်း - ရထား (အနုပညာဌာနခွဲ) အတွက်…
တူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ 1 အမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုစေမည်
TCDD ပို့ဆောင်ရေးအမြဲတမ်းဝန်ထမ်း 353 ဝယ်ယူ Make မှ
ယောဘသည်: အမြဲတမ်းအလုပ်သမား TCDD (TCDD Iskenderun ဂိုဒေါင်ညွှန်။ ) ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
ယောဘသည်: အမြဲတမ်းအလုပ်သမား Eskisehir TCDD ယ်ယူရန်ခဲ
ယောဘသည်: အမြဲတမ်းအလုပ်သမား Zonguldak TCDD ယ်ယူရန်ခဲ
ယောဘသည်: အမြဲတမ်းအလုပ်သမား TCDD Sivas ယ်ယူရန်ခဲ
ယောဘသည်: အမြဲတမ်း Konya တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအလုပ်သမားများယ်ယူရန်ခဲ
ယောဘသည်: အမြဲတမ်းအလုပ်သမား TCDD Erzincan ယ်ယူရန်ခဲ